Inona no tokony hatao raha toa ka very ny fijalianao mba handoko
Hobbies & Activities Painting
Very ny fijaliako. Ny hevitra rehetra?
Fanontaniana: Very Loza Nataoko Ho Foko, Hevitra Ve?
"Tokony ho 10 taona lasa izay dia nanapa-kevitra ny haka sary hosodoko aho, izay efa tadiaviko foana. Tsy naka lesona aho, fa nanomboka nanamboatra loko fotsiny tamin'ny alàlan'ny sary hosodoko fahaefatra nanamarika ny hatsarako sy ny ankamaroan'izy ireo. ...
Tampoka teo dia nanidina avokoa ny faniriana rehetra handoko. Niezaka aho ary niezaka fa ny vokatra dia mahatsiravina. Tsy misy na inona na inona miteraka afo malalaka amin'ny sary hoso-doko fahefatra. Manana talenta, fitaovana, boky sy horonan-tsary aho, fa tsy ny fitiavana. Tsy afaka manonitra lesona tena izy aho ary mankahala ny handoko ny loko amin'ny fitsarana sy ny sary hosodoko. Iza no mahazo hevitra? "- Ed Martell
Hevitra marobe no mitranga amiko, mifandraika amin'ny fahavoazana nataon'ireo fanehoan-kevitra manazava azonao amin'ity sary hosodoko ity ary ny vidin'ny fitaovam-pako. Saingy aloha, ny Art sy ny tahotra teo amin'ireo boky novakianao ve?
Heveriko fa ity boky kely ity dia tsy azo ekena amin'ny firesahana ny tahotra sy ny fisalasalan'ny tena izay mitranga amin'ny famoronana sary hosodoko. Ny kopia dia feno andinin-tsoratra tsy voafaritra, ary averiko ato izany matetika mba hampahatsiahy ny tenako. Ireto misy sombin-tsoratra masina, ao amin'ny pejy faha-dimy: "Ny andraikitry ny ankamaroan'ny sarinao dia ny hampianatra anao ny fomba hampihenana ny ampahany kely amin'ny asa-kanto ataonao."
Ny fiderana dia afaka mametraka anao amin'ny tsy fahombiazana
Rehefa nanaiky ny fitsaràn'ny hafa momba ny hosodoko fahaefatra ianao ho toy ny fenitra izay tokony hanohananao, manandrana mamerina manavao io sary hosodoko io ianao isaky ny manomboka iray vaovao. Natao ho an'ny tsy fahombiazana izany satria tsy manome toerana ho an'ny famoronana ianao fa mametraka fitsipika alohan'ny hanombohanao.
Ny fifaliana amin'ny sary hosodoko dia avy amin'ny asa famoronana mihoatra noho ny vokatra vita. Ary tsy maintsy manome alalana ny tenanao hisambotra ny tsy fahombiazana sy hianatra / hikaroka mandritra ny dingana. Vakio ny lahatsoratra Dancing a Painting ho fanazavana bebe kokoa momba izany.
Manelingelina ny famoronana ny tsindry
Ny ahiahy momba ny fandaniana ny fitaovan'ny zavakanto dia tena manelingelina satria isaky ny mamintina kely amin'ny rambony ianao dia mieritreritra ny vola lany.
Tsy misalasala ianao hanitsy na hanaparitaka ny fizarana na dia fantatrao aza fa diso izany satria mahatsapa toy ny fako. Ny fahasahiranan-tsoa dia mihomehy ny fifalianao.
Tsy misy isalasalana fa tsy mora ny loko menaka sy ny pensilihazo, koa mitandrema amin'ny magazay fivarotana zavakanto eo an-toerana ho an'ny fifanarahana manokana na fivarotana manokana ary misy vola kely atokana ho an'ity fotoana ity. Raha misy fivarotana manokana na fanomezana maimaim-poana ho an'ny vatsy lehibe, dia jereo raha tsy mahita namana na orinasa mpanao asa tanana ianao mba hanaovana lamina iombonana.
Manokàna loko amin'ny asa amin'ny labozia kely kokoa fa tsy amin'ny lehibe. Vonjeo amin'ny fàfana amin'ny lamba amin'ny sary hosodoko amin'ny kitapo na kitapo vita amin'ny hazo izay tena tianao. Mianara manongotra ny laboziao manokana (fa jereo ny saran'ny stretchers, ny tahony, ny lamba ary ny primer dia tsy tonga mihoatra noho ny fividianana zavatra vita vita vita). Azonao atao mihitsy aza ny manamboatra anao manokana raha manana fahaiza-manao asa tanana (na mahalala olona iray).
Amboary ny isan'ireo loko ampiasainao, aza misalasala ny hividy am-polony. Hahafantatra tsara ny lokon'ny loko tsirairay sy ny zavatra hatao rehefa mifangaro amin'ny hafa.
Mba hahazoana ny hafaliana amin'ny hosodoko fotsiny noho ny hosodoko indray raha tsy manahy ny vidin'ny fitaovana ampiasainao ianao, mividy setroka akorandriaka kely sy biriky rano ho an'ny filalaovana sy ny fanoratana.
Fantatro fa ny sary hosodoko amin'ny akora dia samy hafa amin'ny sary hosodoko, fa maro mpanao asa tanana malaza koa dia nampiasa akoram-boasary, anisan'izany ny Turner. Misy vidiny voalohany, fa ny loko mandeha amin'ny rano dia lasa lavitra ary afaka manoratra amin'ny tapa-taratasy, anisan'izany ny mailaka mailaka valopy.
Mamelà ny tenanao hanafoana
Mialà sasatra amin'ny fanerena izay efa nataonao. Omeo lalana ny tenanao fa tsy handoko "sary hosodoko" na " zavakanto tsara ", tsy handoko ny "lohahevitra rehetra", ary tsy hampiseho olon-kafa izay nataonao na miasa raha tsy te hizara ianao.
Raha tokony handravahana sary hosodoko iray manontolo, dia makà kely fotsiny toy ny hazo, sampana, na ny endriny. Mandany fotoana handinihana ny loko, ny aloka sy ny fisehony. Manaova sary vetivety kely amin'ny loko ampiasainao mba hampifangaroana ny loko ao amin'ny tontolo iainana.
Mitadiava fahafinaretana amin'ny fandinihana ny natiora, amin'ny fanamarihana ny antsipiriany, ny fanovana eo amin'ny hazavana miovaova. Ireo zavatra manintona anao any amin'ny toerana voalohany. Manorata naoty, makà sary kely, tazony amin'ny ravina sy voninkazo ... na inona na inona ary midika hoe mandany fotoana handinihana ianao, fa tsy hoe maka fotoana kely fotsiny.
Ny fametrahana izay tanjonao hahatratrarana ny fandehanao amin'ny famoronana dia ny hoso-doko fahefatra fotsiny dia midika fa nalaina an-tongotra teo am-piandohana ianao. Mahazoa fahafinaretana amin'ny fahafantarana fa afaka ary nandoko zavatra tena afa-po ianao (tahaka ny hafa). Jereo indray izay azonao atao rehefa tsy mifantoka amin'ny vokatra farany ianao.
Tantara momba ny Still Life Painting
Fandalinana amin'ny sary hosodoko na zava-kanto
Miteny momba ny loko ny mpanakanto
Trondro fotsy sy menaka mangatsiatsiaka
Iza ilay mpanakanto nandika an'io hosodoko io?
Mpanazava na Artistina?
Manaova fampirantiana ny sary hosodoko
Lisitry ny karazan-teny sy ny adiresy Critique Banky
Sary famantarana ny sary hosodoko: Landscapes
Ny fomba hivarotana sary hosodoko amin'ny mpanakanto malaza
Top 6 Boky momba ny Knite Medieval
Shinoa Wedding Flowers
Fampahafantarana ho an'ny tabilaon'ny Air Air
Tantaran'ny Tempolin'i Golden sy Akal Takhat ao Amritsar
Ahoana ny fomba famandrihana ny rakitra Text amin'ny Perl
Teny fanolorana amin'ny teny Frantsay Déranger
Cheyenne Woods: Ny lalao mandroso sy ny zava-bitany
Anarana 3 Disaccharides
Aiza i Maurice Sendak, ilay zava-manan'aina?
Manaova adihevitra amin'ny adjectives
Tena zava-baovao sy zava-tsarobidy, lasa sy ankehitriny
Italiana Verbs: Celebrate
Ireo fahadisoana 5 lehibe indrindra tao amin'ny Series "Kill" i Bill O'Reilly
Ny zava-misy na ny fiction: Famintinana poofa voapoizina nalefan'ny mailaka
Manatanteraka ny fampisehoana any Delphi
6 Zavatra Hahafantarana Momba ny Gymnast Katelyn Ohashi
Ny fotokevitra Golf: Torohevitra momba ny fototry ny lalao
Bennington College GPA, SAT sy ACT Data
Top 10 "Catfight" Movies: Fiadiana tsara indrindra amin'ny sarimihetsika
Ny fifandraisana amam-pitiavana sy ny fitiavana
You Say Pepperoni ...
Ny Fairy Tales an'i Charles Perrault